सेयर बजारमा ४४ अंकको वृद्धि,... :: कमल नेपाल :: Setopati
सेयर बजारमा ४४ अंकको वृद्धि, ९२ करोडको कारोबार
सेयर बजारको परिसूचक नेप्से ४४ अंकले बढेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा ३. ५४ प्रतिशतले वृद्धि भई नेप्से १२९४ अंकमा पुगेको छ। सवा दुई बजेतिर १३ सय नाघेको नेप्से त्यसपछिको उथलपुथलमा वृद्धिदर खुम्चिन पुग्यो।
कारोबार रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिन ६१ करोडको कारोबार भएकोमा यस दिन ९१ करोड ७७ लाख पुगेको छ। १७६ कम्पनीको सेयर किनबेच भयो। बजारको पुँजीकरण १५ खर्ब १७ अर्ब कायम भएको छ।
यस दिन सबै उपसूचक बढेका छन्। बैंकिङ ३३, व्यापार ७, होटल ८२, विकास बैंक २४, जलविद्युत ७२, फाइनान्स १०, बिमा ३५८, उत्पादन ५२, अन्य १५ र माइक्रोफाइनान्स ८५ अंकले बढे।
यस दिन कारोबारका आधारमा नविल बैंक अग्रस्थानमा रह्यो। उसको ३ करोड १४ लाखको सेयर किनबेच भयो। प्रभु इन्स्योरेन्सको २ करोड ६६ लाखको कारोबार भयो भने एभरेष्ट बैंकको २ करोड ४३ लाख तथा स्टान्डर्ड चार्टडको २ करोड ३७ लाखको सेयर किनबेच भयो।
कमाउनेमा यस दिन पनि लघुवित्त कम्पनीहरु अग्रस्थानमा देखिएका छन्। मूल्य बढ्ने उत्कृष्ट पाँच कम्पनीमध्ये चार वटा लघुवित्त कम्पनी छन्। सूर्योदय लघुवित्त तथा माहुली सामुदायिक लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशतले बढ्यो। मिथिला लघुवित्त, निर्धन उत्थान लघुवित्त र नेपाल इन्स्योरेन्सको मूल्य ९. ९ प्रतिशतले बढ्यो।
गुमाउनेमा राधीका लगानीकर्ता अगाडि रहे। सो कम्पनीको मूल्य ३.४ प्रतिशतले घटेको छ। अन्य गुमाउने कम्पनीको मूल्य गिरावट २ प्रतिशतमुनि रह्यो।
कारोबारका आधारमा वाणिज्य बैंक समूह २३ करोड तथा बिमा समूह १९ करोडका आधारमा अगाडि रहे।
पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्रीले पुँजी बजारको विकासमा सम्वन्धमा दिएको चासोले पनि बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले बताए। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारको विकासका सवालहरु समेटिने विश्वास लगानीकर्तामा छ’ उनले भने।
त्यस्तै तरलतामा समस्या समाधान हुँदै गएकाले अब व्याजदर पनि घट्ने भएकाले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको अर्यालले बताए।
उनले थपे ‘केही बैंकले व्याजदर घट्ने सूचना निकालिसकेका छन्, त्यसकारण अब व्याजदर घट्ने भएकाले सस्तो सेयर उठाउन लगानीकर्ता लालायित भएका हुन्।’
विगत लामो समय बजार घटेकाले अहिले धेरैजसो कम्पनीको मूल्य सस्तो भएकाले लगानीको आकर्षण बढेको उनले बताए। त्यस्तै बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन स्वीकृत पाएकाले आगामी दिनमा बैंकहरुको नाफा बढ्ने र बजार वृद्धिलाई टेवा पुग्ने लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, चैत २५, २०७४, ०५:५२:२१